Tahaka an'i Dennis Chung, lehilahy avy any Honda any Toronto, nanombatombana rehefa nanambara ny vaovao i Honda Europe tamin'ny voalohan'ny volana desambra, hiditra amin'ny tsenan'i Etazonia ilay fiara fanatanjahan-tena kely sy nohavaozina ho an'ny olona roa. Raha ny marina, nilaza i Honda fa ny CRF no fanatanjahan-tena roa misy indroa amin'ny indostrian'ny môtô. Miaraka amin'ny C vaovao ...
Ny satan'ny indostrian'ny fampitaovana volamena any Sina
Ny fantsom-bolamena dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampitana herinaratra sy ny teknikan'ny fanovana. Ny kalitaon'ny vokatra dia tsy mifandraika amin'ny fampandehanana azo antoka ny tariby herinaratra, fa mifandraika koa amin'ny fiarovana ny fananana manokana. Tamin'ny taona 1986 dia nitondra ny departemanta mifandraika amin'ny filankevi-panjakana herinaratra p ...
Prospect fampandrosoana ny indostria
1.1 Famaritana: ny fittings metaly dia kojakoja metaly izay mampifandray sy mampifangaro ny karazana fitaovana rehetra, ny milina fandefasana, ny enta-mavesatra ary mitana andraikitra fiarovana amin'ny rafitra herinaratra. Manana andraikitra lehibe amin'ny fampitana herinaratra sy ny injeniera fanovana izy ireo.1.2 Fanasokajiana: ...
Orinasa teknolojia avo lenta any Sina
Xinwom dia orinasa teknolojia avo lenta mifantoka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary fivarotana kojakoja elektrika. Amin'ny maha mpandray anjara tetikasa nasionaly manana haitao matanjaka sy tanjaka R&D azy, xinwom dia nekena ho toy ny "orinasa teknolojia avo lenta" nataon'ny governemanta tamin'ny taona 2019. Hatramin'ny ...